Iwe neako Kuruboshwe-Ruoko Software | Linux Vakapindwa muropa
Zuva nezuva, kana kamwe chete pasvondo, tinokurukura misoro inotevera pabasa rekudya kwemasikati:
* chimiro chechirongwa kana chirongwa chakanangana nechinhu;
* Java kana mitauro mu .NET;
* mibvunzo yekuti vanhu vangani vanoenda kutenderera pasirese 'isina mazita' iyo inogadzira zvinotyisa mapeji akagadzirwa nemaoko izvo zvisingazombo gonesa muyero;
* Webhu mabhurawuza;
* yemahara software.
Isu hatiwanzo kuuya nemimwe mhinduro, nekuti isu tinogara tichinamatira mumitsara imwechete.
"Ndiri kuda kuripwa nezvandinoita"
«iwe nesoftware yako yekuruboshwe«
Ini ndinofunga iwe waona kuti munzvimbo yangu yebasa pane akakosha mamiriro hwindo. Hazvina kushata, nekuti isu takanangana nekushandisa iyo inoshanda sisitimu iyo inoshandisa yakakwira kwazvo chikamu chevashandisi vanosecha pawebhu (uye vanozopedzisira vapedza iwo maapplication atinogadzira). Isuwo tinowanzo funga kuti vashandisi ava vanoshandisa IE.
Kunyangwe izvi, isu tinazvo (kana tichida kuishandisa, uye zvinosarudzika kuti tidaro) akawanda madiki mafomu ekuzadzisa mamwe mabasa, semuenzaniso, maturusi ekuona maPDF, vatengi veFTP, maprinta ePDF, kunyangwe hofisi software (hongu ... iyo OpenOffice).
Ini pachangu, pandinoisa imwe yakatarwa software (yemahara kana kwete) ndinonyepedzera kuti inosangana nezvinhu zviviri zvakakosha ita zvaunofanirwa kuita uye zviite nekukurumidza. Ini handifarire zita iri, kana ndiani akaigadzira, ini ndinonyanya kufarira mashandiro acho.
Ngatiendei kumuenzaniso wekongiri: Ndiri kuda kuona pdf. Chii chandinofanira kushandisa?
Adobe Reader : hongu, ndiri kuenda kuzoona iyo pdf, uye zvakare mutongi mudiki, sarudzo dzekuitenderedza, zoom in, iyo yekuvandudza mameseji, kuwanda kwemapeji ekushandisa, zvakare chiratidzo chekuvandudza, sarudzo dzekutsvaga, uye pakupedzisira vanofara imwe yekuvandudza chiratidzo ... zvakare.
SumatraPDF: yaishandiswa kuona pdf's. Uye ndizvozvo. Ini ndinogona zoom, tenderera, sarudza mameseji uye voila. Inoita zvazvinofanira kuita.
That the SumatraPDF haina kundinetsa mazuva maviri ega, inozviisa yega uye inoita basa rayo isina kundikanganisa.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri nemabhurawuza. Zvinosarudzwa uye zvinosungirwa kuti mamwe emabasa atinoita anoitwa tichishandisa IE, uye nzvimbo zhinji (zvine rombo shoma uye zvishoma) dzinowirirana zvakanyanya neIE uye hadzienderane nemamwe mabhurawuza.
Kana zvisingakodzeri kushandisa IE, ini ndinoshandisa Safari (yeWindows, hongu) uye ini ndinowanzo bvunzwa "nei uchida Safari?", Kwandinopindura: nekuti inokurumidza, haina kupunzika uye inoita usazvinetse. IE7 inorembera, inononoka zvakanyanya, uye haina kujeka kupfuura Windows Vista inosanganisirwa.
Ukatarisa hurukuro dzatinadzo, pane mibvunzo yakadzika kwazvo. Ini ndinoshandisa chirongwa chinoita zvazvinofanira kuita here kana ini ndinoshandisa ichi chinoshandiswa nemunhu wese? Ini ndinoisa iyi yemahara software iyo ine chokwadi kana mumwe kana vanogadzira kuseri kwayo, nemukana wekumhan'arira zvinovanetsa nekuratidza kuvandudzwa, kana ini ndinoshandisa iyi imwe yandichatofanira kutyora asi iyo munhu wese anoshandisa, uye ini namatira kune dzinogona kuitika shanduro dzemberi kuvhara zvandinotarisira?
Chii chakasarudzika, matatu madiki zvirongwa zvinozadzisa basa razvo kana chingori chimwe chinoita zvishoma zvezvose?
Chii chandinosarudza kuita, kushandisa software yandinopihwa nemusununguri zvemahara uye inondipa mukana wekuwana kodhi yekodhi kuti ndiivandudze, iwedzere nekugadzirisa zvikanganiso zvayo, kana ini ndinotyora software iyi ingangobhadharwa nevamwe vanogadzira kana tariro yekuwana purofiti kubva kwazviri nekupa rutsigiro uye kuitengesa kuti ifukidze maawa-emurume ayo zvakavatora kuti vazvikure?
Ini handizive izvo zvaunotenda, asi ini, kubva kunzvimbo yangu diki, kuyedza kuparadzira yemahara software zvakanyanya sezvandinogona. Handizive kana ndichizokwanisa kubatsira, uye ndinovimba zvechokwadi rimwe zuva kuti ndivake chimwe chinhu chinoshandira vazhinji, vape pachena uye chandinozivikanwa. : D
Zvichakadaro, ini ndinorwa zuva nezuva kuitira kuti desktop yangu iwedzere kuzere nemaapplication emahara.
Ini ndatobvisa Adobe Reader.
Ndichakwanisa kubvisa Windows here?
LINKS: Mutero unozvininipisa kuna Krzystof Kowalczyk, uyo anoda kuita zvinhu zvakapusa uye zvinobatsira! :)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iwe neako Kuruboshwe-Ruoko Software
Nezve iwo mubvunzo wekupedzisira, ndinotarisira kuti ndinogona kuzviita asi handifunge kuti mune ramangwana riri pedyo, iro rima rakasimba uye rakadzika midzi. Ini ndinoona kuti zvirinani kuve nezvirongwa zvakati wandei, yega yega kune yayo yega, uye kwete behemoth inotora nguva kurodha nekudya zviwanikwa kungoona faira, semuenzaniso. Yemahara software kunyorera kazhinji idiki, inokurumidza, yakajeka uye ita basa racho, pasina zvinowedzerwa zvausingazomboshandisa uye zvausingakwanise kubvisa. Batisisa kune yemahara software.
Panyaya yePDF pane chimwe chinhu pazvinhu zvese, semuenzaniso, Adobe neRayo Reader ine rutsigiro rwePDF ine mutsindo uye neminda inozadzwa, asi mazhinji haadi zvese izvo.
Zvichida zvirinani kuve nesoftware diki iyo inoita izvo zvandinogara ndichida, uyezve uye chete kana zvichidikanwa ini ndinoisa imwe kana zvirinani, ini ndinoisa module inozadzisa iro basa.
Chinhu chimwe chete ichocho chinoitika nemahofisi masutu muLinux, iwe unazvo kubva kune OpenOffice Munyori (akazara kwazvo) kuenda kuAbiword (inoita izvo vazhinji vako zvaunoda).
Zvino zvandinofunga nezvazvo Mahara Software vanhu vakagara vachifunga nezvenyaya iyi, kwete seWindows uko zvinoita sekunge vanhu vanogadzira zvirongwa zvikuru nechinangwa chekuve zviyero.
Ikoko zvinoitika sezvakaita Nero, kubva pandakashandisa windows. Ehe, ine ma zioniyoni easina kupusa, ehe, iwo mukaka wakazara, asi ...
a) inoongorora system yako (Ndokunge, inonamira neNorton yemakeke kuti uone ndiani anoyamwa gondohwe)
b) ipapo unofanirwa kugadzirisa zvakare iyo faira roga roga rinovhurwa, patova nemaminitsi makumi matatu apedzwa zvakapusa
c) ipapo, kana Push ikauya kuzosundidzira, anozokutumira maCD kwauri vaviri vaviri
Mune mamwe mazwi, kana suite yekurekodha ikakundikana mune zvekutanga ... Ndezvipi zvakanaka kwandiri kuti ndine zvisina maturo uye zvakanyanyisa kunonoka kurodha?
Kune izvo, imwe freeware yekurekodha chirongwa, uye yakagadzirira ...
Kungofanana neoffice, enda ... uko iro abiword + gnumeric iri ... bvisa zvisina maturo.
SaNacho, ane huwandu hunoshamisa hwezvinhu zvinoshamisa ... asi kana ndichida kunyora mufananidzo, ndinofanira kuupa 19587 laps kusvikira ndawana sarudzo. Izvo hazvina basa kwandiri ...
Ndosaka ini ndichishandisa iyo InfraRecorder, iyo yemahara uye inoshanda mushe.
@Bachi: Ndinoziva kuti ndiri kuita zvisirizvo ndichishandisa Hofisi yangu yakanaka yepirati, ichokwadi, asi ndinotoda kuitenga muhomwe yangu pane kushandisa OpenOffice ... ndinoona zvakashata pakushandisa kwandinoipa, izvo hazvireve kuti zvinobatsira kune vamwe.
Zvirinani pane izvi ndinobvumirana nevandinoshanda navo :)
Ini ndinofunga kuti iwe unofanirwa kuve uine zvimwe zvivakwa kana misimboti kana zvasvika kune "kufamba" (hazvidi kuti uchinje iyo Inoshanda Sisitimu) kune Mahara Software.
Mumwe anofanirwa kuziva kuti hapana 100% purofiti yemakambani emarudzi akawanda kuitira kuti nguva zhinji vaburitse Yakavanzika Software uye voda kuzviita muyero. Photoshop haina kufanana neGimp, asi ngatitarisei kubva kune yakatarisa maonero: GIMP inoigadzira iri pasi pechirevo cheGPL, uye Adobe pasi peRisense Yakazvimirira, yakabhadharwa, uye isina rutsigiro rwemamwe mapuratifomu (uye usadaro huya ne "Chishamiso" Waini).
Tinofanira kufunga zvakare kana tichishandisa SL, nekuti (kunyatso kutaura) haina kufanana nePS. Iko kuoneka, iko kuita zvakasiyana-siyana, kuti kuwanikwa kwemapuratifomu kwaunogona kumhanyisa ... zvakanaka, tinogona kuwana rimwe kana chiuru chisina maturo, izvo zvisina basa.
Ndataura nevashandisi vanofarira kushandisa Brasero kupfuura K3B, nevamwe vanosarudza kubhadhara iyo Linux vhezheni yeNero pachinzvimbo chekushandisa SL uye mahara (mune ino kesi).
Nezve kuravira kwemavara… Asi isu tinogona zvakare kutaura kuti yakawanda SL ndiyo Multiplatform: pahofisi PC, ini ndine Hofisi 2007 Suite (inobhadharwa nekambani) uye OpenOffice zvichiteerana. Ini ndinoshandisa MSN, asi panguva imwechete ini ndinoshandisa Pidgin nekuti yakawanda-protocol. Zvisinei, pane mhinduro uye ndeye kuziva SL zvishoma nezvishoma senzira yeSP inogara vazhinji.
Mune yangu nyaya ndinoda kusimbisa chimwe chinhu chinoitika kwandiri: hapana chinhu chinogutsa kupfuura kushandisa chirongwa chemahara uchiziva kuti hausi kunzvenga chero mutemo ... Kubva ipapo kuenda kune zvinoitwa neiyo SL, imwe nyaya.
PS: Ndakamirira makomendi akaita sekuti "ko kana ... asi neAdobe handiite zvinhu senge muGIMP" ... "Nero ndiyo yakanakisa Kurekodha Suite" ... "Mahara Software haina basa" .. etc.
Kwaziso uye yakanaka kwazvo yekupinda.
@ N @ ty: Wamboedza iyo OpenOffice 3 nyowani?
Iyo software yakasiyanasiyana uye inoitirwa zvidimbu zvakasiyana, asi dzimwe nguva vashandisi vanofunga kuti kune zvirinani zvirongwa kupfuura zvimwe.
Mune yangu nyaya ini handidi Windows Office kunyanya asi ndinoziva mashandiro ayo. Ndinovimba vamwe vedu tinogona kubata nezvenyaya iyi, yakakurukurwa zvakanyanya, kunyanya gore rapfuura nyaya yemagwaro (OOXML vs. ODF) uye izvo zvine chekuita neHofisi.
Zvese zvinhu zvinoenda mupfungwa yemumwe neumwe. "Sezvo ini ndisingazive zvakawanda nezvemakomputa, saka ndinongoshandisa Izwi (kana nero, kana IE)." Zvese zviri mumisoro yevanhu.
Kwemwedzi mishoma ndanga ndichitaura neshamwari dzangu nezvezvakanaka zveLinux uye zvirongwa zvemahara uye vakazvitambira zvinoshamisa. Ichokwadi ndechekuti vanhu vatatu vandakaisa linux, vakazvibvumira kubva pakudikanwa, ndiko kuti, nekuti yavo Hardware yaisakwanisa kutsigira kumhanya windows uye kuti vanogona kuvhura anopfuura mapurogiramu maviri panguva imwe chete. Ivo vane hardware yazvino havafarire kuenda kuburikidza nekunyaradzwa kunofungidzirwa kunopihwa nepropathiary software (iyo yavakatove vaisa_).
Zvese zvinhu ingori nyaya yezvinodiwa uye fashoni.
Zvinodiwa neOpenOffice.org ndezvimwe zvinhu, zvinogona kuzviita ... chinenge zvese kubva kuMicrosoft Office .. Asi iwo mashoko .. Zvino ... Wati waona chii chitsva muOpenOffice 3.0? Chaizvoizvo, ivo vazivisa chete kuti ine yemuno interface muMac OS X ... Asi, izvo zvazvinazvo, uye pamwe hapana kana munhu akataura, ndiwo iwo madhairekitori ... Izvo zviri chaizvo SOOOO yakanaka ...
Nehurombo, vhezheni 3 muchiSpanish haisati yaburitswa, kunyangwe ivo vasingazotora nguva refu, nekuti izvozvi vanogona kushandisa RC 4
chokwadi ndechekuti uri kutaura chokwadi, kune chikamu changu ini ndinoda Opera pane firefox kana konqueror
nekuda kwezvikonzero zvina izvi:
pandakaishandisa mumahwindo ndiyo yega bhurawuza (ini ndaingoziva firefox neIE) izvo zvisina kukonzera mabara anosvota
Hazvina basa kuti ndinoshandisa chii ini ndichagara ndinazvo
Iyo tsamba mutengi uye iyoirc iyo yainounza yakanaka uye ivo vanoita kuti zvinhu zvive nyore kwandiri
Ini handifanire kuwedzera zvinowedzera kwariri, mabasa ese andinoda ndeef4 kure
Unogamuchirwa Daniel, waona kuti zvinobatsira sei?
Ndinovimbawo kutenga kabhuku kuti ndiise ... uh ... Debian, ndiani anoziva.
Kwaziso huru :)
Kutenda iyo sumatra, zvinoita kwandiri zvakanyanya kushanda kupfuura acrobat, uye ini ndinogona kuitakura pane usb uye ndione ma pdf kuyunivhesiti kana mune cyber, yakanaka.
Zvino, pane iyi nyaya, ini handichinje zvachose kuLinux nekuda kwechikonzero chiri nyore chemitambo (ikozvino ndiri kutamba) uye nekuti handisi ndoga ndinoshandisa pc, ndinovimba kuti panopera gore ini ndinogona kutenga iyo laptop, siya mitambo padivi uye shandisa linux zvachose, ndaneta chaizvo nekutsvaga mitswe uye serial yezvinhu zvese.